Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Isaiah 27
Nepali New Revised Version, Isaiah 27
1 त्‍यस दिन परमप्रभुले आफ्‍नो डरलाग्‍दो, शक्तिशाली र ठूलो तरवारले त्‍यो सुल्‍कने सर्प, लिव्‍यातन्‌, त्‍यो गुँडुली बस्‍ने सर्पलाई दण्‍ड दिनुहुनेछ। उहाँले समुद्रको विशाल अजिङ्गरलाई मार्नुहुनेछ।
2 त्‍यस दिन, “फल दिने एउटा सुन्‍दर दाखबारीको विषयमा गीत गाओ।
3 म, परमप्रभु, त्‍यसको हेरचाह गर्छु। म त्‍यसमा निरन्‍तर पानी हाल्‍छु। म रातदिन त्‍यसको देखरेख गर्छु, नत्रता कसैले त्‍यसलाई नोक्‍सानी गर्ला।
4 म रिसाएको छैनँ। सिउँड़ी र काँढ़ाहरूले मलाई रोक्‍न उम्रेका भए त म तिनीहरूका विरुद्धमा लड़ाइँ गर्न जाइलाग्‍नेथिएँ। म तिनीहरूलाई जलाउनेथिएँ।
5 तिनीहरू शरण लिन मकहाँ आऊन्‌। तिनीहरू मसित मिलाप गरून्‌। हो, तिनीहरू मसित मिलाप गरून्‌।”
6 आउने दिनहरूमा याकूबले जरा गाड्‌नेछ, इस्राएल फुल्‍ने र फल्‍नेछ, र समस्‍त पृथ्‍वीलाई फलले भर्नेछ।
7 के त्‍यसलाई हिर्काउनेहरूलाई हिर्काउनुभएझैँ उहाँले त्‍यसलाई हिर्काउनुभयो? त्‍यसलाई मार्नेहरू मारिएझैँ के त्‍यो पनि मारियो?
8 तपाईंले त्‍यससित झगड़ा तथा त्‍यसलाई देश निर्वासन गरेर त्‍यससित युद्ध गर्नुहुन्‍छ। पूर्वीय बतास चलेको दिनमा जस्‍तै उहाँले त्‍यसलाई भयङ्कर वायुको झोक्‍काले उड़ाइदिनुहुन्‍छ।
9 यसैद्वारा याकूबको अधर्मको प्रायश्‍चित गरिनेछ, र त्‍यसको पाप दूर गरिएको सारा फल यही हुनेछ। जब त्‍यसले वेदीका सबै ढुङ्गाहरू खरी-ढुँगाझैँ चकनाचूर पार्छ, तब अशेरा देवीका खम्‍बा र धूप बाल्‍ने वेदीहरू फेरि खड़ा हुनेछैनन्‌।
10 सुरक्षित सहर निर्जन भयो, निर्जन र त्‍यागिएका वासस्‍थान उजाड़ भूमिझैँ भयो। त्‍यहाँ बाछाहरू चर्छन्‌, त्‍यहाँ तिनीहरूले विश्राम गर्छन्‌, र तिनीहरूले त्‍यसका हाँगाहरू लुछेर नाङ्गै बनाउँछन्‌।
11 जब त्‍यसका स-साना हाँगाहरू सुक्‍छन्‌, तब ती भाँचिन्‍छन्‌ र स्‍त्रीहरू आएर ती आगोमा जलाउँछन्‌। किनकि समझै नभएको यो एक जाति हो। यसैकारण तिनीहरूलाई बनाउनुहुनेले तिनीहरूमाथि टिठ्याउनुहुन्‍न र तिनीहरूका सृष्‍टिकर्ताले तिनीहरूमाथि निगाह गर्नुहुन्‍न।
12 त्‍यस दिन परमप्रभुले बगिरहने यूफ्रेटिस नदीदेखि मिश्रको खोलासम्‍मै आफ्‍नो अन्‍न छाँट्‌नुहुनेछ, र हे इस्राएली, तिमीहरूचाहिँ एक-एक गरी जम्‍मा गरिनेछौ।
13 त्‍यस दिन एउटा ठूलो तुरही बज्‍नेछ। अश्‍शूरमा नष्‍ट हुनेहरू र मिश्रदेशमा निर्वासित भएकाहरू आएर यरूशलेमको पवित्र पर्वतमा परमप्रभुको आराधना गर्नेछन्‌।
Isaiah 26 Choose Book & Chapter Isaiah 28